Ndingaita Sei Kuti Ndisaongororwa Zvandinoita? | Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kazakh (Arabic) Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tiv Turkish Turkmen Ukrainian Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Yoruba Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Ndingaita Sei Kuti Ndisaongororwa Zvese Zvese Zvandinoita?
Nei vabereki vachida kungoongorora zvese zvese zvandinoita?
Vabereki vako vangati vanodaro nekuti vane hanya newe. Asi iwewe unoona sekuti vari kuda kungoziva zvinhu zvisinei navo. Semuenzaniso:
“Dhedhi vangu vanotora foni yangu vobva vanditi ndivape password yangu, votanga kuverenga mameseji ese anenge arimo,” anodaro mumwe musikana ari kuyaruka anonzi Erin. “Kana ndikaramba, vanoona sekuti pane zvandiri kuda kuvavanzira.”
Denise uyo achangoti pfuurei makore 20, anoyeuka mhamha vake vachiongorora bhiri refoni. Anoti: “Vaitarisa nhamba dzese dzandaifona pafoni yacho, vondibvunza kuti ndedzaani uye kuti ndakataura nyaya dzei nemunhu wacho.”
Mumwe musikana achiri kuyaruka anonzi Kayla, anoti mhamha vake vakamboverenga zvaiva mune rimwe diary rake. “Raiva nezvinhu zvakasiyana-siyana zvaitika muupenyu hwangu, uye zvimwe zvacho zvaiva nechekuita navo! Kubva ipapo ndakabva ndasiyana nezvekunyora mudiary.”
Zvaunofanira kuziva: Ibasa revabereki vako kuziva zviri kuitika kwauri, uye haungakwanisi kuudza vabereki vako pekugumira pakuita basa iroro. Uri kuona sekuti pamwe pacho vanozonyanyawo here? Pamwe ndizvo. Asi chinofadza ndechekuti pane zvaunogona kuita kuti usazviona saizvozvo.
Buda pachena. Bhaibheri rinotikurudzira kuti tive “vakatendeseka muzvinhu zvose.” (VaHebheru 13:18) Ita zvinoita kuti uve akatendeseka kuvabereki vako. Paunowedzera kuva akatendeseka uye uchivabudira pachena, izvozvo zvinogona kuita kuti vasade kugara vachiongorora zvese zvese zvaunoita.
Zvekufunga nezvazvo: Vabereki vako vanovimba newe here? Unosvika pamba nenguva here? Unoita kuti vasaziva shamwari dzako here? Unovavanzira zvaunoita here?
“Ndinofanirawo kuita zvinenge zvataurwa nevabereki vangu. Hapana chandinovavanzira. Ndinovaudza chero chavanenge vachida kuziva, uye izvozvo zvinoita kuti vavimbe neni uye vasanyanya kutarisa zvese zvese zvandinoita.”​—Delia.
Iva nemwoyo murefu. Bhaibheri rinoti: “Rambai muchizviedza kuti muone kuti makadini.” (2 VaKorinde 13:5) Zvinotora nguva kuti vabereki vako vazovimba newe, asi unenge washandira zviripo.
Zvekufunga nezvazvo: Vabereki vako vakambovawo pazera rekuyaruka. Unofunga kuti izvozvo zvinoita kuti vabereki vako vade kuziva zvakawanda sei pamusoro pezviri kuitika muupenyu hwako?
“Ndinofunga kuti vabereki vanoyeuka zvikanganiso zvavakamboita, saka vanenge vasingadi kuti vana vavo vari kuyaruka vaitewo zvikanganiso zvakadaro.”​—Daniel.
Funga kuti vanonzwa sei. Edza kuona zvinhu semaonero anoita vabereki vako. Bhaibheri rinotaura kuti mukadzi anokwanisa ‘anotarisa zvinoitwa muimba yake’ uye baba vakanaka vanorera vana vavo “mukuranga nokutungamirira pfungwa kunoitwa naJehovha.” (Zvirevo 31:27; VaEfeso 6:4) Kuti vaite izvozvo, vanotofanira kuziva zviri kuitika muupenyu hwako.
Zvekufunga nezvazvo: Kudai waiva mubereki, nekuziva kwawava kuita zvinoitwa nevari kuyaruka, waizorega here kubvunza mwana wako kuti uzive zviri kuitika kwaari?
“Kana uri pazera rekuyaruka, zvinoita sekuti vabereki vako ‘vanoda kungoziva zvese zvese nezvisinei navo.’ Asi iye zvino semunhu ati kurei, ndava kuziva chinoita kuti vabereki vadaro. Vanenge vachitoratidza kuti vanokuda.”​—James.
“Vabereki vangu havachanyanyi kuda kungoziva zvese zvese zvandinoita, asi vakandibatsirawo kunzwisisa kuti raiva basa ravo kugara vakaisa ziso ravo pandiri. Iye zvino ndayaruka, asi ndichiri kungoda kuti vandibatsire uye vandidzidzise. Kunyange wakura, hapana paungazoti hauchadi kubatsirwa nevabereki vako.”​—Makenzie.
“Pandainge ndichiri kuyaruka, mhamha vangu vaigara vachiuya mubhedhurumu mangu, vondibvunza kuti ndaswera sei uye kuti zvinhu zviri kundifambira sei. Panguva iyoyo, ndaiona sekuti vaida kungoziva zvese zvese nezvisinei navo. Asi iye zvino ndava kunyatsoona kuti zvavaiita zvairatidza kuti vaiva nehanya neni chaizvo.”​—Lauren.
Ungaita Sei Kana Vamwe Vachida Kungoongorora Zvese Zvaunoita?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndingaita Sei Kuti Ndisaongororwa Zvese Zvese Zvandinoita?
ijwyp nyaya 61